HBO ရဲ့ Euphoria ပီတိ penises ရှိထားသည်, သို့သော်အဘယ်အရာကို TV ထဲမှာ vulvas အကြောင်း, ရုပ်ရှင်? - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » သိပ္ပံ "HBO ရဲ့ Euphoria ပီတိ penises ရှိထားသည်, သို့သော်အဘယ်အရာကို TV ထဲမှာ vulvas အကြောင်း, ရုပ်ရှင်?
HBO ရဲ့ Euphoria ပီတိ penises ရှိထားသည်, သို့သော်အဘယ်အရာကို TV ထဲမှာ vulvas အကြောင်း, ရုပ်ရှင်?
Tele RELAY တစ်ခု 1 ဇူလိုင်လ 2019
ဘယ်အချိန်မှာ HBO ရဲ့ Euphoria ပီတိ ပြသဖို့ icts 40 အတွက်အစီအစဉ်အပိုင်း Dick ၏ 302ခန့်မှန်းခြေစက္ကန့်, ကမ္ဘာ့အကအကြောင်းတစ်ခုစုပေါင်းလားရဖို့သလိုပဲ။ မှ သတင်းသမားတွေ သို့ ကျပန်းကလူ Twitter ပေါ်တွင်၏အဆုံးမဲ့, မေးခှနျးထုတျဟောပြောပွဲရှိတယ်ခဲ့ Dick, Dick, Dick။ ဒါဟာဟုတ်ပါတယ်အတွက်အတော်များများက Dick ပါစေတစ်ဦးတည်း, အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့သြဒါဟာဆဲဒစ်ကြည့်ဖို့ဝတ္ထုခံစားရဒါကတကယ်တော့သောက် peen ၏သက်သက်အသံအတိုးအကျယ်ခဲ့သည် ခေတ်ရေစီးကြောင်းတီဗီနှင့်ရုပ်ရှင်များ။ အဲဒီတချို့က selon ကြောင့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းမြင့်တက်ခဲ့ရဲ့, ဒါဟာတကယ်တော့နေသော်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ (နောက်ဆုံးညဥ့်ရဲ့ Euphoria ပီတိ ဇာတ်လမ်းတွဲ featured သေး Dick နောက်ထပ် installation ကို Reviews, Comprenant un micropenis ။ ) အဲဒီ cameos gawking ပေါင်းစပ်လာအောင်နှိုးဆွလေ့, Locker အခန်းကဟာသ, homophobic နှင့်ခံစားချက်များကို, အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့သြရည်မှန်းချက်, ဟောလိဝုဒ်ရဲ့အဖော်အချွတ်အကြေးခွံများထင် Re-balancing န်းကျင်စဉျက, သက်သက်မူးရှိပါတယ်။ ၏အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ် နောက်ဆုံးတော့ယောက်ျားလည်းအဝတ်အချည်းစည်းရတဲ့နေကြတယ်.
ဒါဟာမိတ်ဆွေတစ်ဦးခေတ်ရေစီးကြောင်းရုပ်ရှင်နဲ့ TV အတွက် penises အကြောင်းကိုလိုလိုလားလားရေးသားခဲ့သည်သူကားအဘယ်သူဒါက dedicatedly -mentioning ခဲ့ဂျာနယ်လစ် @ တစ်တွစ်တာအကောင့်မှငါ့ကိုသတိပေးဒါကဒီမကြာသေးမီဒစ်-phoria ကြားတွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒီအကောင့်အလားတူအကောင့်အသစ်များ၏လက်တဆုပ်စာတစ်ယုန်ပေါက်ငါ့ကိုချဦးဆောင် qui တူသော hashtags ကိုအသုံးပြုခဲ့ #FreeTheV နှင့် #TIMETOSHOWVAGINALIPမှာ, အထုတ်ဖော်ပြောဆိုဒေါသ Euphoria ပီတိ ကြောင့်န်းကျင် "ရှင်းရှင်း fuck ဆိုတဲ့စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ် dual-စံချိန်စံညွှန်းများ" On-screen ကိုအဝတ်ဗလာဖို့စိတ်ပြင်းထန်ခြင်း။ အဖြစ်မှန်၏ဤလွှတ်ပေးရန်အတွက်, ဒါဟာလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်လိင် screen ပေါ်မှာ objectified ခဲ့ကြတဲ့အဘယ်သူသည်အမျိုးသားများအတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒီအကောင့်တစုံတပါးကဲ့သို့, @Alexluvspussy ပြုလုပ်ထား: "pussy ကိုပြသသောပြပွဲနှင့်ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်အမည်ပြောပါ။ ငါရာပေါင်းများစွာအထီးလိင်အင်္ဂါကိုပြသအမည်ကိုနိုင်ကြောင်း။ ... အမျိုးသား objectification အမျိုးသမီးထက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်ပြန့်ပွားသည်နှင့်ယောက်ျားပေါင်းအမျိုးသမီးတွေမဟုတ်ညစ်ညမ်းနည်းလမ်းတွေထဲမှာအပြည့်အဝတိုကျရိုကျပြနေကြသည်။ ၏ Euphoria ပီတိတိုင်းတစ်ခုတည်းနဲ့အခြား HBO ပြပွဲရယူထားသောတစ်လိင်တံလမ်းကိုဆကျဆံတိုင်းလက်မ "(သူ Tweet လုပ်ခဲ့သူကားအဘယ်သူအမျိုးသမီးတစ်ဦးမှပြန်ကြားခြင်းခဲ့" အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အဘို့ငါကဒီမှာပေါ့။ ")
Zendaya Coleman ရဲ့ဇာတ်ကောင်လမ်း Euphoria ပီတိအပိုင်း3အတွက်ဖတ်နေတဦးတည်းဒစ် pics ပေး
ငါခြောက်လနောက်လိုက်နဲ့တွစ်တာအကောင့်ဒါကပြောဖို့မုန်းနှင့် "ခွေုံ" အမျိုးသမီးရေးဝါဒီများ, စက်ဆုပ်ရွံ "ခေတ်သစ်အမျိုးသမီးများကို" နှင့်လက်ဝဲ "ပြက္ခဒိန်" ငါ့ကိုငါ့စဉ်းစားတယ်ရည်မှန်းချက်စဉ်းစားတယ်အကြောင်းကိုခြဲ့ကားပွောခါနီးစိတ်သဘောထားရှိပါတယ်။ ဒါဟာငါ့ကိုယောက်ျားရဲ့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေး-နဲ့ကျွန်မတချို့က Dick အကြောင်းကိုသင်ပြောပြပေမဲ့ငါအစဉ်အဆက်တစ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းတီဗွီရှိုးသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင် vulva မမြင်စဖူးမျိုးမှတ်မိနိုင်ဘူးဒါက၏အတော်များများကဖြစ်ရပ်များအကြောင်းကိုစဉ်းစားတယ်။
ခေတ်ရေစီးကြောင်းဖျော်ဖြေရေးအတွက်မြင်နိုင် vulvas ရုံကိုဘယ်လိုဘုံရှိပါသလဲ
TV နဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုကဲ့သို့ခပ်သိမ်းသောကျနော်တို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်အစဉ်အဆက်ကိုမှတ်မိသို့မဟုတ်ရေတွက်နိုင်ထက် On-screen ကိုရင်သားပိုသာဓကကိုတှေ့မွငျကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝသက်တမ်းငါတို့သည်-ရှိသည်။ ခါးပတ်အောက်သော်လည်း, ငါသာအမြိုးသမီးမြားရဲ့ဆီးခုံမို့မို့ဆံပင်၏ခဏ, နေရာ၌ပုံရိပ်ကိုတကွက်မှတ်မိနိုင်ပါ။ အကယ်စင်စစ်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း closeups တူသောဘာမျှ Dick ဟာဝှေးအတွက် flopping နှင့် dangling နေကြတယ် Euphoria ပီတိ ဇာတ်စင်, qui ဖန်တီးသူဆမ် Levinson တစ်နှစ်အဖြစ်ဖော်ပြထားတယ် ဆကျကွေး 1976 ရဲ့ရန် Carrie။ ce Que မူရင်းဇာတ်စင် en, တစ်ဦးကအနည်းငယ်အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဝှမ်း display ကိုအပေါ်အပြည့်အဝခြုံနှင့်အတူကိုယ်လုံးတီးလမ်းလျှောက်, ရည်မှန်းချက်, အများစုမှာကျိန်းသေ, clitoral သို့မဟုတ် labial အဘယ်သူမျှမနီးစပ်-ups ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းဖွင့်ပုံကိုဘုံ မြင်နိုင်သော ခေတ်ရေစီးကြောင်းဖျော်ဖြေရေးအတွက် vulvas?
Semi-လေးနက်သတင်းစာပညာအောင်လိုက်တဲ့အခါငါ Motion Picture အမေရိကတိုက်၏အသင်း (MPAA), ရုပ်ရှင်တွေ spleens ဒါကကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်နောက်ကျောငါ့ထံသို့တယ်ဘယ်တော့မှဘယ်သူအရင်းအမြစ်မှရည်ညွှန်းခဲ့, ပြိုင်ပွဲအဘို့အတွက် qui est အီးမေးလ်၌ဤကိစ္စကိုထား မအင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များ။
နောက်ဆုံးတွင်ဤငါ့ကိုဦးဆောင် မစ္စတာအရေပြား နှင့် မစ္စတာက Manအမြိုးသမီးမြား featuring, Twin-One ဝက်ဘ်ဆိုက်များအလွန် breathlessly ခေတ်ရေစီးကြောင်းပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှုကနေအဝတ်ဗလာ၏ဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုပြုစုနေကြသည်ခံရမှုအတွက်အကြောင်းပြချက်အခြား-ဘယ်သူ့ယောက်ျား။ အဆိုပါ (အမျိုးသမီး) ဖေါ်ပြခြင်းအဖြစ်တံဆိပ်ကပ် 9,512 မြင်ကွင်းများဖေါ်ပြခြင်း "ချုံ" နှင့် 3,288 မြင်ကွင်းများ "လိင်တံ," selon CEO ဖြစ်သူဂျင်မ် McBride site ကို-ရှိသည်။ သူသည်သင်တို့တစ်ဖြောင့်-on ကိုပစ်သတ် vulva ရမယ့် arent အခြို့က 'ခြုံ' 'မြင်ကွင်းများခုနှစ်တွင် "သို့သော်ရှင်းလင်း။ ဒါဟာရှာရုန်ကျောက်စာများတွင်တူသောမြင်သာ biased နိုင် အခြေခံပညာဗီဇ ရွှေမာရီယာ Bello အကြမ်းဖက်မှုများ၏သမိုင်း။ 346 ရဲ့ Rosario Dawson -including အလွန်ရှင်းလင်းသောရိုက်ချက်များ "" သူကသူတို့က Be ဒါကလိုအပ်ပါတယ်ပြောပါတယ်ထားတဲ့ labia-ဖေါ်ပြခြင်းအဖြစ် tagged သာ 2013 တိကျတဲ့မြင်ကွင်းများရှိပါတယ် " အီလက်ထရွန်နစ်အကဂီတ.
အခုတော့ဒီအအတိအကျသိပ္ပံနည်းကျဒေတာမဟုတျပါဘူး: နှစ်ဦးစလုံးဝက်ဘ်ဆိုက်များ porn နဲ့တူဒဏ္ဍာရီရုပ်ရှင်ထဲကနေကလစ်များအပါအဝင်, ခေတ်ရေစီးကြောင်းဟောလိဝုဒ်၏ပြင်ပမှတချို့ကပျော်ရွှင် feature နက်ရှိုင်းသောလည်ချောင်း။ မည်သို့ပင်, McBride သူခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲမှာ On-screen ကိုဒစ်တစ်ဦးမကြာသေးခင်ကမြင့်တက်, ဒါကရည်ရွယ်ချက်မြင်ကြရဲ့ဆိုလိုသည်မှာ "လိင်တံတွေ့နေရတုန်းပဲ vulva ထက်လျော့နည်းဘုံရှိပါတယ်။ " သာလျှင်သျောသငျသညျထိုနည်းတူစွာပင်အားလုံးသူများသည်နေရာ၌ "ချုံ" တွေ့နေရသည်ရေတွက်လျှင်ကပြောပါတယ်။
qui အားလုံးသည်ပြောဖြစ်ပါတယ်: ဒါဟာပန်းသီးနှင့်လိမ္မော်သီး, ဒါမှမဟုတ် vulvas နှင့် penises, ဒါမှမဟုတ် vulvas နှင့် vulvas နှိုင်းယှဉ်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ Dick မျှမျှတတထွက်ရှိနိုင်သည် protuberant, dangling ။ ဒီတော့ vulvas တစ်ဒီဂရီမှအသီးသီး, လို့ရတယ်။ မစ္စတာအရေပြားရဲ့နှင့် A-list ကိုကြယ်ပွ '' Full-တိုကျရိုကျမြင်ကွင်းများမစ္စတာက Man ရဲ့စုစည်းဗီဒီယိုများမှတဆင့်တစ်လှည့်ဖျားယူခြင်း, ပိုပြီးမြင်နိုင် peen များအတွက်အကောင့်ဒါကခန္ဓာဗေဒကွာဟမှုရှိပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ပိုပြီးအကြိမ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ကြောင်းသြစတေးဒါရိုက်တာများ nonchalantly ရေတွင်း-lit ဒစ်ပြသစဉ်ရည်ရွယ်ချက်, မှောင်မိုက်အရိပ်နှင့် positioning ကိုအတူ vulvas ဖုံးကွယ်ဖြစ်ပါတယ် sccm အဘယ်မှာရှိ။ ယူပါ, ဥပမာ, တစ်ဦးအနီးကပ်တက်ရည်မှန်းချက်အပြည်အစုံတပ်ဆင်ထားသောမြေအောက်ထဲမှာ Scarlett Johansson ရဲ့အဝတ်အချည်းစည်းယောင်ခဲ့သည် အဆိုပါအရေပြားအောက်မှာ တစ်ဦး sunlit Daniel Craig အတွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ မတ်ေတာသမာရျနတျဖြစ်ပါသည် သူ့ခြေထောက်တစ်ရေချိုးကန်ထဲမှာပွင့်လင်း splayed အတူ။
Penises ဒါမယ့်အစားမကြာခဏညီမျှအဖြစ်ရင်သား on-screen counterpoint အကြောင်းကိုစကားပြောနေကြသည်, qui vulvas တစ်ခုလိုက်တယ်အနည်းငယ်နဲ့တူခံစားရ၏။
charmingly "Celebrity Labia ဖော်ထုတ်ခံရ" အမည်ရတောင်မှမစ္စတာအရေပြားသီချင်းစာရင်းကိုမှောင်မိုက်အရိပ်, ဒါမှမဟုတ်အတွင်းခံအဝတ်အစားသို့မဟုတ်ဘောင်းဘီတိုထဲက peaking labia majora ၏အခြားပုံရိပ်ကိုတကွက်နှင့်ပြည့်ဝ၏။ ဒါက qui လေ့ဟောလိဝုဒ်အတွင်းအမျိုးသမီးများသရုပ်ဆောင်တွေကအသုံးပြုဆီးခုံမို့မို့ဆံပင် wigs ဖြစ်ကြသည် merkins ၏ဘာမျှမပြောမယ့် အထူးသ ပြူးလာပြီးဖျောက်ရန်မဆိုနည်းနည်း။ ဆီးခုံမို့မို့ကြိုးနှံကုလားကာ, သင်အလိုတော်ရှိလျှင်။ မပေးလည်းအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မစ္စတာက Man အားဖြင့်မီးမောင်းထိုးပြသည့် Full-တိုကျရိုကျမီးမောင်းထိုးပြအတော်များများအတွက်, A-list ကိုသရုပ်ဆောင်တွေဟာဒစ်ဖျောထုတျပိုကောင်း၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူဆောင်ဖို့ sccm ။
Penises ဒါမယ့်အစားမကြာခဏညီမျှအဖြစ်ရင်သား on-screen counterpoint အကြောင်းကိုစကားပြောနေကြသည်, qui vulvas တစ်ခုလိုက်တယ်အနည်းငယ်နဲ့တူခံစားရ၏။ သူတို့ကမမြင်ရတဲ့သော်လည်းအဖြစ်ကျနော်တို့ပြုမူခြင်း, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် '' em ဖြစ်ချင်တယ်နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောလိဝုဒ်ဒီတော့သူတို့ကိုကို။
သော်လည်းရင်သား, မစ္စတာအရေပြား 39,431 တချို့ကမြင်ကွင်းများကက်တလောက်ရှိပါတယ်။ ဒါကမြင်ကွင်းများနှင့်အတူ tagged နေကြသည်အဖြစ်နီးပါးတဆယ်နှစ်လုံးကိုအကြိမ်အဖြစ်အတော်များများရဲ့သိပ်အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါက "လိင်တံ။ ": တစ်ဦးက 2014 လေ့လာချက် အမြိုးသမီးမြားကိုတှေ့ခဲ့ ဝတ်လစ်စလစ် fait Que တစ်နှစ်ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်တွေပေါ်လာဖို့ဖြစ်နိုင်ချေယောက်ျားထက်သုံးကြိမ်ထက်ပို။ အမြိုးသမီးမြားရဲ့အဖော်အချွတ်ကို default အဖြစ်ကုသလျက်, ယောက်ျားရဲ့အဖော်အချွတ်ကလွဲရင်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ခုနှစ်, MPAA 2010 အတွက် မိတ်ဆက် မိန်းမတို့အဘို့ညီမျှသတ်မှတ်ချက်မိတ်ဆက်ခြင်းမပါဘဲတစ်ဦး "အထီး်ဗလာ" သတိပေး။
အဘယျကွောငျ့ဖွစျနိုငျပါ Euphoria ပီတိ သူတို့ရဲ့ All-In penises ကျနော်တို့-ပါပြီတကယ်အများကြီး On-screen ကို vulva မသိမမြင်ရရင်တောင်တစ်ဦးအနိုင်ရရှိတူသော desexualized, Locker အခန်းကိုဘုန်းအသရေ-ခံစား flaccid ။ ကျနော်တို့ရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွေအတွက်, အထူးသဖြင့် screen ပေါ်မှာအများကြီးပိုပြီးအမျိုးသမီးကိုယ်လုံးတီးအလောင်းကောင်များ၏မြင်နေဖို့အသုံးပြုကြပါသည်။ McBride ရှိသည်နိုင်ကြောင်း, "အခွင့်အလမ်းတွေကိုအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်တစ်ဦးဝတ်လစ်စလစ်ဇာတ်စင်မရတဲ့အခါ, တက '' sexy '' အခြေအနေတွင်အတွက်ဖြစ်သွားမယ့်ဒါကဖြစ်ကြသည်။ " သူကဆက်ပြောသည် "ကျနော်တို့ MrMan.com မှ add အထီးတိုကျရိုကျ်ဗလာ၏တစ်ဦးကအများကြီးပြုံးရယ်အဘို့ကစားနေသည်, အတွက်ဂျေဆန် Biggs နဲ့တူ အမေရိကန်လည်ပေါင်းစီးခြင်းအာဒံကို Devine အတွက် က Man ကျော်ဂိမ်းရွှေ, Jason Segel စာရာသည်မာရှယ်မေ့။ "(သူကကိုယ်လုံးတီးနဲ့တည်ငြိမ်မှုခံစားနေရသောလူစုများကြားနှင့်စိတ်ပျက်ဖွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှရပ်အဖြစ်ခုံသေတ္တာများတွင် Segel ရဲ့ဇာတ်ကောင်အတူတက်ကျိုးပဲ့နေတဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ )
နောက်ဆုံးတွင်အဆိုပါဒစ်, vulva ချုံများနှင့်ရင်သား Tally သင်အဖြူပုံဖော်လျက်ရှိသည်ကိုမည်သို့နှင့်စာတမ်းခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကိုအဘယျအအခင်းအကျင်းအတွက်အကြောင်းကိုဘာမှမပြောကြဘူး။ on-screen ကိုယ်စားပြုမှုတစ်ခုခန္ဓာဗေဒ tit-များအတွက်-Tat (ပင်ကဲ့သို့လွယ်ကူသည်မဟုတ် if လူတိုင်းသင်) qui ရှယ်ယာညီမျှဖြစ်ကြောင်းသဘောတူနိုင်ခဲ့ပါ။
လိင်တံ cameos ၏ဆွေမျိုးရှားပါးနေသော်လည်းသူတို့ selon McBride "သူတို့ကဖြစ်ပျက်လာတဲ့အခါအများကြီးပိုစာနယ်ဇင်း, get လေ့" ။ szene အတွက်ဝတ်လစ်စလစ်နဲ့ Chris Pine ရဲ့အပြည့်အဝတိုကျရိုကျ ဘုရင်ကရာဇဝတ်သား ထိုသို့သော (ဒီမှာငါရဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် guiltily ငါ့လက်ကိုမြှင့်). "ဒါဟာအာရုံစူးစိုက်မှုအရာဝတ္တုတစ်ခုတစ်တန်ကိုမြင်ရဖို့ဝေးလံသောရိုက်ချက်နဲ့ Hard ဖြစ်ထွက်လှည့်တယ် "ဟု၎င်းကပြောသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, Rosamund ပိုက်နှင့်လေဒီဂါဂါ "အပြည့်အဝတိုကျရိုကျလေ၏," McBride "အများကြီးမဟုတ်ဖောင်းပွစေရန်။ " ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကရုပ်ရှင်ထဲတွင်ရှိသည်နိုင် ဘယ်ကဟောလိဝုဒ်ကျနော်တို့တောင်မှထူးခြားတဲ့အဖြစ်အမျိုးသမီးဗလာအသိအမှတ်ပြုရပ်တန့်တော့အဲဒီဗလာထက်အကြေးခွံ righting ဖြစ်ပါတယ်ဒါကလျော့နည်းသတ္တိရှိရှိဖွင့်လျှင်သင်တွေးမိပါစေခြင်းငှါ, ။ ဆန့်ကျင်ကြောင်းနေစဉ်, ပြော, နေသမျှကာလပတ်လုံးကလက်ခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခင်းအကျင်း titillating ရွှေရဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါသည် ရင်သားကင်ဆာနို့တိုက်ကျွေးရေး.
BGR - တောင်ကိုရီးယားငှက်အုပ်စုတစ်ခုဖြစ်ထွက်လှည့်သောပန်းကန်ပြားပျံ ... ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တိုက်လေယာဉ် scrambles
သူမ၏ vulva နှင့်သူမ၏လိင်အင်္ဂါအဘို့ဂရုစိုက်ဖို့ကိုဘယ်လို
အဆိုပါဘောလုံးသမားရှမွေလသည် Umtiti သားကောင်
မိဖုရား၏သတိပေးချက်: တော်ဝင်အကူအညီအထောက်အပံ့များကိုမင်းသားဟယ်ရီနှင့် Meghan Markle ဖော်ပြမဧည့်သည်များမေးပါ
အိန္ဒိယ: အိန္ဒိယကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မိန့်ခွန်းမီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသွားရောက် | အိန္ဒိယသတင်း
သိကောင်းစရာများ: Xbox One မှာ S ကိုသာ€ 1 မှ 169 ရန်
အီဘရာ: ငါ MLS ၌ငါ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အကောင်းဆုံးပေါ့
ကင်မရွန်း - ဂျော့ဘ်223
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်4,485
TECH & Telecom2,021